एसईईको नतिजा हेर्न कठिनाइ भयो ? यसो गर्नुहोस् - सिम्रिक खबर
एसईईको नतिजा हेर्न कठिनाइ भयो ? यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । आजै बोर्ड बैठक बसेर नतिजा प्रमाणीकरण गरिएको हो ।
यसवर्ष ४ लाख ८२ हजार ९८६ विद्यार्थीले लागि आवेदन भरेकोमा विद्यालयहरुबाट परीक्षाका लागि ४ लाख ७४ हजार ७८ जना विद्यार्थीको विवरण प्राप्त भएको बोर्डले जनाएको छ । सोही विवरणलाई बोर्डले रुजुर ग्रेडिङ गरी प्रमाणीकरण गरेको हो ।
नतिजा थाहा पाउनको निम्ती निम्न वेभसाइटमा चेक गर्न सकिने छ । भने तल दिइएका नम्बरहरुमा पनि मेसेज पठाउन सकिनेछ ।